Bhodhi Mutambo Wongororo yeSencha: Edo Period Yekutengesa Mutambo - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Chikamu 69%Chikamu 69%
Sencha mumuedzo: Izvo Kune mitambo yebhodhi pane inenge nyaya yese. Saka pane zvakare sarudzo inonakidza kune vese vanoda tii. Kunyangwe nemazita anozivikanwa akadai seFormosa Tea, umo vatambi vanotsvedza mutsoka dzevaridzi veminda yetii, kana Chai, iyo inoda musanganiswa wetii wakakwana. Muna 2020, mutambo webhodhi Sencha kubva Yekupedzisira Level Mitambo, iyo yakaburitswa mumutauro weGerman kugariswa naTaverna Ludica, yaive chikamu cheiyi nhevedzano yemitambo ine infusion chiitiko. Chinonyanya kutariswa pano chiri pamusika wetii munguva yeJapan Edo. Izvozvo zvinopa chiitiko chinofadza here? Iverenge iwe pachako.
MuSencha, kugadzirwa kwetii kukuru kweJapan kwaizovakwa panguva yeEdo. Nguva iri pakati pa1603 na1868, inoonekwa senguva refu yerunyararo muJapan. Kuti vave mutongi wePleasure Market, vatambi vanofanirwa kuunganidza mashizha etii voatengesaswochitengesa pamusika wochipa kutemberi. Mutambo uyu unogona kutambwa nemugadziri wemutambo Paco Yanez aine vatambi vaviri kusvika vana. Kuchinjana kuita chimwe chezviito zvishanu. Nekuti muSencha hamuna nhanho chaidzo kana kutenderera.
Mutambo webhodhi kwete chete kune vanoda tii
Mutambo unotambwa uchichinjana kusvika chimwe chezviitiko zviviri zvakafanotemerwa zvaitika. Mutambo unopera kana zvese zvaidiwa pamakadhi emusika wetii zvazadzikiswa kana mutambi asvika mapoinzi manomwe ekukunda. Mutambi atora nhamba yepamusoro-soro yekukunda pakupera kwemutambo anova mugadziri wetii akabudirira kwazvo muJapan uye anohwina mutambo weSencha. Mutambo unotambwa nezvinhu zvemhando yepamusoro. Yakagadzirwa nenzira inonakidza uye yakadzama yekutenda kumuratidziri Francisco Arenas.
Zvisingashamisi, Sencha ndeye tii uye kutengeserana kwayo muJapan yekare. Mufananidzo: Volkman
Sencha's artwork inotsanangurwa zvakanyanya seyakasikwa-toned, realistic, uye Asian. Mavara emhando dzetii aripo, Sencha (girinhi), Sakura (pingi) uye dema tii (dema), anokwevedzwa zvinokwezva kuburikidza nezvose zvirimo. Izvi zvinofadza maziso uye zvinounza tarisiro kumutambo nekukurumidza kana mutambo wekutengesa uye wevashandi wamiswa.
Kana iwe ukanyatsotarisisa zvinhu zvemutambo, unogona kuona kuti zvikamu zvese zvave zvichinyatsoshanda, zvine mavara uye zvakadhindwa. Uye zvakare, iyo inoshanda, diki bhokisi remutambo rinobva rabata ziso, iro rinofanirwa kukwana mubhegi rega rega uye nekudaro rinoita Sencha board game ive yakakodzera mutambo muperekedzi wekufamba. Iine murongi akagadzirwa nekadhibhodhi yakaonda, chena. Iwo maviri macompartments anofanirwa kumisa zvinhu zvemutambo zvakanaka. Pazvikamu zvega, pane 39 hombe dhai remapuranga, 9 girini, 15 pink uye 15 dema, ruvara rwega rwega runomiririra imwe yemhando yetii, 8 madiki madiki dhayi anoratidza mapoinzi nemari, 20 dzimba mune 4 mavara (girinhi, tsvuku, bhuruu. uye yero), makadhi ekutamba 36, ​​anosanganisira temberi ina, minda yeminda ina, vashandi gumi nevatanhatu, misika yetii gumi, nharaunda imwe chete nenzvimbo imwe chete yekuchengetera dzimba, homwe nhema yevelvet yemacube etii uye mabhuku maviri emitemo, rimwe muchiGerman uye rimwe muchiRungu. .
Dingindira rakamiswa, asi rinoitwa zvakabatana. Mufananidzo: Volkman
Pakutanga, kugadzika kwese kunosanganisira chete kugadzirira bhegi remacube etii, kuisa makadhi ekudyara uye madhishi evashandi, nzvimbo yekuchengetera dzimba, uye musika wetii dhizaini uye nharaunda kadhi. Chii chinosiyanisa Sencha ndechekuti mutambi wega wega ane nzvimbo yake yemutambo, iyo pakutanga kwemutambo ine kadhi retembere, imba ine ruvara rwezvavanoda, kadhi rekutanga revashandi uye nzvimbo inoratidza mari yavanotambira iyezvino uye mapoinzi ekukunda. . Mutambo unotambwa uchichinjana uye munhu wese anozvitambira. Mutambi anogona kusarudza chimwe chezvishanu zvingaitwa. Anotenga imba, anovaka imba, anohaya mushandi, anogadzira uye anounganidza tii, kana kutengesa tii pamusika.
Mienzaniso yacho inogutsa. Mufananidzo: Volkman
Sencha inosanganisa nhoroondo uye kutengeserana
Tenga imba: Dzimba dzinoshandiswa kugadzira tii. Kana pane imba pamunda, tii inogona kurimwa uye kuunganidzwa ipapo yeYen. Kana mutambi achida kushandisa imwe imba kubva panzvimbo yake, anogona kuzviita nechiito ichi.
Kuvaka imba: Kuvaka imba yakatengwa pamunda, mutambi anofanira kubhadhara imwe mari yen uye ozoiisa pamunda kana nharaunda. Semubairo, marudzi mashanu etii anogona ipapo kuiswa pamunda. Sezvo mutambo uchifambira mberi, mhando imwe chete yetii inogona kuunganidzwa paimba. Kana paine dzimba nhatu pakadhi, pane chando chekuvaka chekudyara ichi. Paunenge uchivaka pandima, mutambi anogashira imwe yen paimba pakutengesa kwega kwega kunoitwa pamusika wetii uye imwe yekukunda pakupera kwemutambo. Ngozi! Dzimba dzinodhura mitero iyo panofanira kugara paine yen yakakwana mukupihwa kwevatambi.
Hidza mushandi: Nechiito ichi, vashandi vanogona kupihwa mari dzakasiyana dzeyen. Panogona kuve neanopfuura matatu pamutambi wega wega uye aya anogona kuchinjirwa kunze sezvo mutambo uchienderera mberi. Kunze kwemushandi wekutanga. Mushandi wega wega anopa mabhenefiti akasiyana. Semuenzaniso, mbongoro inopa mutambi kuti atore macube maviri eti, kunze kweiyo Sencha siyana, uye murimi anopa chero cube yetii yemhando ipi neipi inogoneka. Pakazara, murimi, dhongi, muunganidzi nengoro zvinowanika pano nemitengo iri kuwedzera uye zvakanakira zvakasiyana.
Kugadzira uye kuunganidza tii: Pamunda wega wega wauinayo imba, unogona kubhadhara yen muchikamu chino kugadzira zvisina kujairika tii cubes. Ipapo imwe yemhando dzetii inogona kuunganidzwa kune imwe neimwe imba pamunda. Kuti aite izvi, mushandi anofanira kutumirwa uyo anogona kungokohwa nhamba nemhando dzakaratidzwa pakadhi rake.
Kutengesa paTea Market: Pamwe mutambi anotengesa chero huwandu hwetii yake pamusika kuti atore yen yakakwana yezviito zvake zvinotevera kana kuti anopa tii yake kumutongi sekudzoka kwemapoinzi ekukunda. Pamusika wetii, mhando dzakasiyana dzetii dzinotarisa huwandu hwemari. Mutemberi, mutongi anogara achida Sencha tii, kuti awane nzvimbo yekukunda kubva kune mamwe marudzi, vatambi vanofanira kusanganisa marudzi sezvakatsanangurwa. Nzvimbo dzekutengesa pamusika wetii dzinogumira pamhando dzakasiyana. Nokudaro, kutamba kwekufungidzira kwakakosha mukusimudzirwa uku. Pangosvika imwe yesherufu makoramu yazadzwa, kadhi idzva remusika rinoratidzwa. Somugumisiro, mafambiro akarongwa anowanzovhiringidzwa. Nekudaro, kana musika wakavharwa, iwo marudzi etii kubva kune yako yekugovera anga atozadzwa pamusika wetii anogona zvakare kupihwa kune mutongi.
Kana chimwe chezviitiko zviviri zvekupedzisira zvaitika, chikamu chekugova chichatanga. Nechinangwa ichi, mapoinzi ekukunda anoverengwa uchishandisa zvibodzwa makadhi. Vashandi nengoro, imwe yen, imba yega yega uye ruzhinji rwemhando dzetii mumatemberi vanowana mamwe mapoinzi. Mutambi ane zvibodzwa zvakawanda ndiye anohwina.
Euro bhodhi mutambo: Sencha ndeye zvese zvine mavara dhayisi uye mapoinzi. Mufananidzo: Volkman
Nhamba yevatambi: 2 kusvika 4
Nguva yekutamba: anenge maminitsi makumi mapfumbamwe
Genre: Strategic Board Game
Maitiro makuru: kuiswa kwevashandi, mapoinzi
Vanyori: Paco Yanez
Mifananidzo: Francisco Arenas
Gore rekuburitswa: 2020
Mutengo: anenge 20 euros
Sencha haisi kungonakidza chete kune vanobatana nekupisa infusion chinwiwa, kofi junkies uye cocoa slurpers inogonawo kuuya nayo patafura nechido. Kudyidzana kwakawanda kwekutamba pakati pevatambi hakufanirwe kutarisirwa panguva yemutambo. Asi, munhu wese anotamba ega. Nekudaro, Sencha inopa mikana mishoma yekuti vatambi vapindire zvine hungwaru. Semuenzaniso nekuvaka imba kana kutengesa pamusika wetii. Nekuda kwehukuru hudiki hwebhokisi, mutambo wakanaka wekufamba. Sencha inonyanya kukodzera semutambo wemhuri unonetsa kana sehusiku hwevanoziva. Sencha inogutsikana nehunyanzvi hwayo hwekudhirowa uye mipfupi yemitemo, iri nyore kunzwisisa uye ichiri kupa imwe inodakadza gameplay.
Iyo inofananidzwa yeAsia dhizaini uye yemhando yepamusoro dhizaini zvakare inokwezva kutarisa. Dingindira rekutanga rinochinjika. Kunyangwe iwe uchitora kofi kana cocoa bhinzi wozvitengesa hazvina basa kune iyo mutambo. Asi nhoroondo yekare yenguva yeEdo, Japan uye nyaya yetii inopindirana zvakakwana nemufananidzo wose. Kunyangwe vakadzidziswa nyanzvi vatambi vanogona kunakidzwa neSencha. Kwete semutambo mukuru wemutambo wehusiku, asi kune yakasununguka groove, senge nightcap kana yekufamba. Nokuti mitambo yekutengeserana seSencha inopa musanganiswa wakakodzera wemirairo yakatsanangurwa nokukurumidza uye gameplay iyo isiri nyore
Musoro unogonan inogona kuridzwa zvakaenzana muvaviri kana nevatambi vanosvika vana, sezvo zvikamu zvechiito zvipfupi zvichingowedzera low downtime inouya. Kana iwe uchida, iwe unogona kubhuroka kwenguva yakareba, asi nguva yekumirira kusvika iwe pachako kufamba kwako kazhinji yakakwana kuronga. Nekuti iyo tactical mikana ishoma, zvekuti iwe unonyanyo kunetseka nezve yako mukana mumutambo. Asi izvozvo hazvikanganisi kunakidzwa kwemutambo. Vana vadiki vachanakidzwa zvishoma neSencha, asi zvinofadza kune vechidiki nevakuru. Chiitiko chekare hachidikanwi, kungoverenga zvishoma asi zvakakwana kwemitemo uye chimiro. Muchidimbu, Sencha inotamba nekugadzirira kushoma uye inopa kunakidzwa kwakawanda kune vakura vatambi. Kana iwe ukapinda nekuiswa kwevashandi uye nzira yekutengesa usingatarisiri mutambo wenyanzvi, iwe unowana kunakidzwa kwakawanda mubhodhi uye kadhi mutambo Sencha.
mhedziso Sencha mutambo wekutengesa nezve tii, iwe unozadzisa maodha, wozopedzisira waunganidza emavara cubes. Iyo compact board game haina kushata, asi haina kushamisira futi. Musoro - kunyangwe wakagadzirwa - unotambirwa zvakanaka, sekuitwa kwekuona patafura yemitambo. Sencha mutambo usina kudzika weeuro une mitemo iri nyore kudzidza.
Kare Ongororo yeBhuku: Batman: Nyika yeRima Knight
Inotevera Duisburg mutambo mushure mezvose! 2022 ikozvino muDortmund
Crowdfunding: Yazvino mitambo yebhodhi paKickstarter (20th svondo 2021)
WWE 2K Nzvimbo dzekurwira bvunzo: haina kukwana, asi inonakidza bhatani rinopwanya
Bhodhi mutambo wongororo: Alleswisser - Mutambo webhodhi
Solo bhodhi mitambo paKickstarter muQ2021 XNUMX